အိမ်ခြံမြေ ငှါးရန် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
မြို့ သစ် No.2466 RC ၂ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အနောက်မြောက်ဘက်လှည့် ) ၅၉ လမ်း ဝန်းကျင် / သိပ္ပံလမ်း တောင်ဘက်
** ၈ သိန်း ** မြို့သစ် No.2435 RC ၂ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အရှေ့ဘက်လှည့် ) ၅၈ လမ်းဝန်းကျင်/ မနော် - သိပ္ပံကြား
မြို့ သစ် No. 2429 နံကပ် ၁ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ (အအရှေ့ဘက်လှည့် ) မနော်တောင်ဘက်/၆၇ လမ်း ဝန်းကျင်
##ငှားမည်## ** သိန်း ၄၀ ** မြို့ သစ် No. 2428 RC ၄ ထပ်ခွဲ ပေ ၄၀ - ၆၀ (တောင်ဘက်လှည့် ) မနော်တောင်ဘက်/၆၇ လမ်း ဝန်းကျင်
12 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
** ၁၂ သိန်း ** မြို့ သစ် No.2380 RC ၂ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အရှေ့ဘက်လှည့် ) ၆၄ လမ်း ဝန်းကျင်
new ocean အနီး No.2398 ထရံ ၁ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အနောက်ဘက်လှည့် ) ဘောလုံးကွင်းတောင်ဘက် မြို့သစ်
7.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
##ငှားမည်## ** ၈ သိန်း** မြို့ သစ်/ဆ No.2352 RC ၁ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အရှေ့ဘက်လှည့် ) New ocean အနီး မြုိ့သစ်
##ငှားမည်## ** ၁၅ သိန်း ** new ocean အနီး No.2371 RC ၃ ထပ်ခွဲ ပေ ၂၀ - ၆၀ ( တောင်ဘက်လှည့် ) ၆၈ နှင့် မနော် လမ်း ဝန်းကျင်
13 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
##ငှားမည်## ** ၁၃ သိန်း ** new ocean အနီး No.2372 RC ၃ ထပ် ပေ ၂၆ - ၄၀ ( တောင်ဘက်လှည့် ) ၆၈ နှင့် မနော် လမ်း ဝန်းကျင်
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်သည် မန္တလေးမြို့၏ တောင်ဘက်တွင်ရှိသော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။ မြို့နယ်၏ အနောက်ဖက်တွင် ဧရာဝတီမြစ် ၊ မြောက်ဖက်တွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ တောင်ဖက်တွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်များဖြင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသည် ။ မန္တလေးမြို့၏ ထင်ရှားသောမဟာမုနိဘုရားကြီးသည် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည် ။ အခြားထင်ရှားသောနေရာများဖြစ်သည့် မဟာမုနိဘုရားကြီး ၊ ချမ်းမြသာစည်လေဆိပ် ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံ ၊ ကန်းတော်ကြီးဥယျာဉ်နှင့် သူနာပြုတက္ကသိုလ်တို့ တည်ရှိသည် ။ မန္တလေးမြို့တွင်းနှင့် အနည်းငယ်လှမ်းသောချမ်းမြသာစည်သည် လူနေထူထပ်မှု အတင့်အသင့် တည်ရှိသည် ။ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများသည် အခြားမြိ့နယ်များထက်စာလျင် သင့်တော်ပြီးနေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည် မြို့နယ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။